Noocyada qaar ayaa aad ugu hanjaba isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Noocyada xayawaanka iyo dhirta labadaba waxaa halis ku ah isbedelka cimilada. Ama kordhinta iyo muuqaalka ugaarsadayaasha cusub, kala qaybsanaanta deegaannada, biyaha iyo wasakheynta carrada ama si fudud u beddelidda xaaladaha deegaanka.
Noocyada ay saameynta ugu badan ku yeelatay saamaynta durba la ogyahay ee isbedelka cimilada ee aan helno balanbaalis apollo, alpine lagópogo iyo pinsapo. Saddexdaan nooc waxay ku jiraan liistada noocyada ugu halista badan ee Isbaanishka isbedelka cimilada.
Gemma Rodríguez waa isku duwaha Shabakada Natura 2000 ee Sanduuqa Caalamiga ee Caalamiga ah ee Dabeecadda (WWF), wuxuuna cadeeyay in sedexdaan nooc ay kujiraan qatar culus oo ka imaaneysa saameynta isbadalka cimilada. Warbixin ah Meeraha nool, oo ay fulisay WWF, taas oo lagu tilmaamay saamaynta taban ee isbeddelka cimilada ku yeelan karo noocyada ku nool meelaha ugu go'doonsan ama aad u xaddidan. Isku dheelitirka deegaanka ee nidaamka deegaanka si uu u ahaado mid xasilloon, waxaa fiican in la helo tiro badan oo noocyo ah oo wada nool si xiriirka ka dhexeeya iyo ku tiirsanaanta aysan u keenin dhicitaanka nooc inuu noqdo silsilad dabar go'eysa.
Taasi waa sababta xoolaha iyo dhirta ku nool meelaha sare ama, liddi ku yihiin, hooseeyaan ugu nugul ka hor saamaynta isbeddelka cimilada, tan iyo muddadiisii ​​la qabsiga xaaladaha cusub ay dheer tahay. Noocyada ay ku yartahay awooddooda firidhintu sidoo kale way nugul yihiin.
Noocyadan, isbeddelada nidaamka deegaanka waxay sababi karaan isbeddello cilmu-nafsiga, taasi waa, wareegyada nolosha. Tusaale ahaan, noocyada kalluunka qaarkood, isbeddelka cimilada wuxuu sababi karaa wax ka beddelidda awoodda taranka. Shimbiraha qaar ayaa wax ka beddeli kara heesahooda ama xitaa qaababka ay u haajiraan.
Warbixinta Nolosha Dunida ee kor lagu magacaabay waxay muujineysaa in Spain ay ka mid tahay dalalka ugu nugul isbeddelka cimilada ee ka dhex jira Midowga Yurub. Saameyntani waxay u horseedi kartaa kala badh noocyada ambiibiyiinta, xamaarato, xayawaanada naasleyda ah iyo shimbiraha halista ugu jira in deegaanadooda la yareeyo in ka badan saddex meelood meel. Marka taa laga reebo, daraasado dhowr ah ayaa muujinaya in xayawaannada iyo dhirta ay durba u dhaqaaqeen dhanka sare ee meelaha sare oo ay si aad ah ugu raaxeysan karaan kuleylka.
Haddii noocyada xayawaanka iyo dhirta ay bilaabaan inay u haajiraan woqooyi iyagoo raadinaya heerkul ka wanaagsan oo aan diirranayn, waxay bilaabmi doontaa inay dhacdo saboolnimada kala duwanaanshaha noolaha. Tani waxay sababi kartaa isku xirnaasho la'aan u dhexeysa nidaamka deegaanka iyo kala-jajabinta taas oo ka dhigeysa iyaga xitaa inay u nugul yihiin saameynta isbeddelka cimilada.
Tusaale ahaan, liiska ay soo diyaarisay WWF ee 10-ka nooc ee ugu khatarsan Spain isbadalka cimilada darteed, balastarka balastar apollo waa shaxda ugu horeysa. Balanbaaliste waxay ku nooshahay aagaga buuraleyda ah, iyada oo kuleylka sii kordhaya, waxaa lagu qasbi doonaa inay raadiso aagagga sare.
Tusaale kale oo ka mid ah noocyada ay saamaynta badan ku yeelatay isbeddelka cimilada ayaa ah alpine lagópod ama inta badan loo yaqaan ptarmigan. Noocani wuxuu aad ugu habboon yahay qabowga daran. Cimiladan waxaa kaliya laga helaa Isbaanish oo ah 1.800 mitir oo sare oo Pyrenees ah. Waxay isticmaashaa dhogor cad si ay isugu dhex dabooliso barafka dhexdiisa iyadoo kororka kuleylka awgood lagu qasbi doono inay kordhiso joogga baaxadiisa. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin xagga helitaanka cuntada iyo hoyga, maaddaama heerarka noocan oo kale ah kheyraadku ku yar yahay xaaladduna ay tahay mid aan fiicnayn.
Dunida dhirta, mid ka mid ah noocyada ugu xasaasisan waa firka Isbaanishka, oo ku nool kaliya meelaha roobabku sanad walba ka da'o sida Serranía de Ronda. Isbadalka cimilada ayaa sababa abaaro marba marka kadambeeya. Taasi waa sababta geedahani u daciifaan una nuglaadaan muuqaalka cudurada iyo cayayaanka. Khubarada cilmiga dhirta ayaa ka digaya in dhamaadka qarnigan Waxaa si dhib leh jiri doonin kaymo beroosh dambe.
Waxa kale oo jira noocyo kale oo loo hanjabay sida kalluunka loo yaqaan 'Atlantic salmon', toic umulisada Betic, badda posidonia, shirib yar, Montseny newt ama qorraxda birta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Noocyada qaar ayaa aad ugu hanjaba isbedelka cimilada